बैंकिङ अन्तरबार्तामा जानुअघि के के कुरामा ध्यान दिने ? - Aadil Times
१८ जेष्ठ २०७८, मंगलवार २२:४४ | Aadil Times
बैंकमा जागीर खान चाहानुहुन्छ भने तपाईँले आफूलाई सोही अनुसार तयार राख्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, तपाईँसँगै सोही जागीरका लागि अन्य थुप्रैले एप्लाई गरेका हुन्छन् । कयौँमध्येबाट छनौट गरेर तपाईँलाई नै किन राख्ने त ? यसका लागि तपाईँसँग अरुमा नभएको र बैंकलाई काम लाग्ने सीप, क्षमता वा योग्यता हुनुपर्छ । यसका अलावा तपाईँले जागीरका लागि दिने अन्तर्वार्ताले पनि रोजगारदाताको दिमागमा एउटा छाप छोड्नुपर्यो । जागीरका लागि परीक्षा दिन तयार भएजस्तै अन्तर्वार्ता दिँदा पनि तयारी गर्नु जरुरी हुन्छ । अन्तर्वार्ता दिन जाँदा तपाईँसँग सम्बन्धित विषयमा कति ज्ञान छ भनेर त हेरिन्छ नै तपाईँको बसाई, हाउभाउ, फेसियल एक्सप्रेसन लगायतलाई पनि उत्तिकै ख्याल गरिन्छ । यीनै आधारमा तपाईँलाई अन्तर्वार्ता लिने व्यक्तिले नम्बर दिँदै जान्छ । त्यसैले, अन्तर्वार्तामा जानुअघि र गइसकेपछि यी कुराहरुमा अवश्य ख्याल गर्नुहोस् :